Alahady androany | Mankalazà Crafts | Saripika sary maimaim-poana ho an'ny download
Alahady androany | Mankalaza ny asa tanana
Ny marika an-jazakely homemade
Ny tagy fahavaratra dia ny fitaovana ho an'ny fiaran-dalamby amin'ny fahavaratra! Ny fiaran-dalamby amin'ny andro fahavaratra dia fanao avy amin'ny Pfalziana ary misy faritra hafa akaiky ihany koa. Amin'ny alàlan'ny lozam-pifaliana manintona ny ririnina dia noroahina, taloha koa izy no nanana ny fomban'ny fahafatesana.
Ny lovantsofina amin'ny andro fahavaratra
Ny tsingerin'ny andro fahavaratra dia maneho ny fiainana vaovao, ny lohataona ary ny fiandohan'ny vanim-potoana vaovao. Miankina amin'ny fiarahamonina, ny fiaran-dalamby amin'ny andro fahavaratra dia mitranga alohan'ny Paska, amin'ny fomba mahazatra amin'ny Alahady fahatelo alohan'ny Paska.
Tinker ny andro fahavaratra
Ny malaza fanao Kurpfälzer lalana, manana mpanompo sampy angamba tena fakany ary hahita porofo azy amin 'ny fotoana ny Masoandro King, Louis XIV. Na izany aza efa nanome ny andro fahavaratra Insert mareva-doko àry, dia tsy fantatra. Aorian'ny lamasinina andro antoandro, ny ririnina dia nodorana tamin'ny endriky ny mpihomehy goavam-be iray amin'ny sehatra goavana.
Inona no atao hoe andro fahavaratra?
Ny kitapom-baton'ny andro dia tsora-kazo tsotra, antsoina hoe Stecken, izay misy lokon-tsarobidy. Ao an-tampony dia mipetrapetraka ny atodinan'ny leven ary indraindray aza ny atody iray nipoaka ho famantarana ny fiainam-baovao sy lohataona - eto dia afaka mahita ny fifandraisana amin'ny Paka ianao!
Any amin'ireo tanàna sasantsasany, paoma na fehezam-boninkazo kely dia fomban-drazana amin'ny andro fahavaratra. Miaraka amin'ireo marika mamirapiratra eny an-tanany, ireo ankizy dia miaraka amin'ireo fiara voarindra amin'ny klioba isan-karazany. Amin'ny farany, mazava ho azy fa azo atao ny sakafom-bary mamy - ho an'ny tanora indrindra indrindra, ny lohahevitra rehetra!
Ary tonga izao ny torolalana tsotra momba ny fomba hanaovana io andro fahavaratra mamy io. Izany dia manandratra ny fihetseham-pandehanana indrindra raha ny lanezy any an-tsaha dia tsy te-hanonofy ary efa nanonofy ny loko lohataona ny ankizy.
Voalohany, mila ireto zavatra manaraka ireto ianao: ny hazelnut na tehina bararata (ny koa ao amin'ny fivarotana voninkazo), antsy fanao am-paosy, dia tsofina-avy atody, ny Hefebrezel (mofo Ny tena tsara ny tenanao!), mitoto vary na crepe taratasy.
Voalohany ianareo toro-hevitra ho an'ny zanaky ny mpiasa zavatra, manomboka ny plug avy any ambany-niakatra tamin'i vita-mitoto vary (na novidina, na teo aloha koa ny tena tinkered) ho manify. Raha tianareo ny mampiasa papyrus, dia azonao atao koa ny manamboatra ny tsangantsanganana amin'ny andro fahavaratra miaraka amin'ny loko marevaka. Mora kokoa izany indrindra ho an'ny ankizy madinika. Raha tsorina lava maro crepe taratasy horonam-peo eo an-tampony, handrava ny kely sy handeferako ny Hefebrezel sy ny atody eo aminy -, dia ilay andro lohataona manao firaisana.
Raha tianao, dia azonao atao ny mametaka ny tsorakazo miaraka amin'ny taratasy matevina, tsy misy fetra amin'ny fijerinao!
Nicholas | Mankalaza fety
Mankalaza ny Halloween
St. Martin - Saint Martin Mankalaza fety
Seranana lehibe ho an'ny fararano sy ny ririnina
Manaova trano vorona anao ... Tinker amin'ny ankizy
Manaova kitapo miaraka amin'ny ankizy
Manamboara vorondolo anao Saint Martin
DIY amin'ny ankizy - DIY
Tinker amin'ny ankizy - fitaovana voajanahary
Tinker amin'ny ankizy - sira manify
Tinker amin'ny ankizy - Hazo Fiainana
Fandaharam-panafahana lesona momba ny fanabeazana momba ny firaisana